रविको हिरासतकै अडियो सार्वजनिक- यहाँ मलाई जे पनि गर्न सक्छन् – Nepal Insider
एकाएक जग्गाको मूल्यको ह्वात्तै घट्ने सम्बावना, के आर्थिक तरलता आएकै हो त नेपालमा ?
कोरोना संक्रमण बाट बच्न नेपाल प्रहरी द्वारा धनगढीमा सचेतना मूलक र्याली
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रविको हिरासतकै अडियो सार्वजनिक- यहाँ मलाई जे पनि गर्न सक्छन्
चितवन– पत्रकार टेकनारायण भट्टराईले चितवन प्रहरीको हिरासतमा रहेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसँग कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ ।
भट्टराईको युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक भएको भिडियोमा हिरासतमा रहेका लामिछानेसँग भएको कुराकानीको अडियो समेटिएको छ । हामीले यहाँ पत्रकार टेकनारायणले लामिछानेसँग गरेको कुराकानीको अडियो उतारेर प्रस्तुत गरेका छौं ।
भेट अघिको अवस्था टेकनारायणले वर्णन गरेका छन् । आफू रविलाई भेट्न जाँदा रविको अनुहार मलिन भएको पाएको उनले बताएका छन् ।
हामीले भए तीन मिनेटमा यो रिपोर्ट बनाएर सकिन्थो । तर पुलिसको यति धेरै दिन लाग्ने रहेछ ।
जसले अनुसन्धान गर्ने भिडियो चोरेर वा निकाले दियो त्यो कसले दियो । दानबहादुर जीले दिनुभयो । मसँग त उहाँले सुरक्षित छ भन्नु भएको थियो ।
उहाँहरुको अनुसन्धान मरिसकेको मान्छे ल्याए मात्र पूरा हुन्छ । मरेको शालिकरामलाई कहाँबाट ल्याउने ?
कुनै दिन प्रचण्डलाई सलाम गर्थे भन्दैमा दानबहादुरजी जे पनि गर्न पाउँछ ?
आवाजविहीनहरुको आवाज बोल्ने मान्छेलाई सिधै मार्दे भै गो नि त्यस्तो पीर छ भने ।
मैले भनेको छु त्यस्तो कुनै योजना छ भने छातिमा हान्नु हान्न चाँहि छातिमा हान्नु पिठ्युतिर नहान्नु भनेको छुँ ।
मलाई गरिएको व्यवहार राम्रो छ यहाँ । यहाँ जति राम्रो गरेपनि निर्णय नै गलत गर्न खोजियो भने । सबैले मलाई माया गरेका छन् । तर त्यसले म्याटर गरेन । सुमसुम्याएर भिरबाट धकेलेपछि त्यो सुमसुमाइको मजा के भयो ?
सबै थाहा हुँदा हुँदैपनि श्रीमतीसँग राम्रो देखिन मसँग लाजले, युवराजसँग रिसले र आफूसँग विवाह गर्न नमानेपछि अस्मितासँग रिस देखाउन प्रतिसोध देखाउन भिडियो बनायो ।
म यहाँ कितावहरु पढिरहेको छु, मैले पत्रिकाहरु पढिरहेको छैन ।
मुलधार मिडियाले मैले गरेको कामलाई पत्रकारिता मानेन । लोकप्रिय भएको देखेपछि कतिपयलाई यो के पत्रकारिता भनेको होला भने ।
लकडाउनमा कर्मचारी र श्रमिकको तलब ऋण लिएर भएपनि खुवाउन आदेश : तलब काट्न नपाउँने
कतारमा कोरोना सङ्क्रमित नेपालीको सङ्ख्या झण्डै सात हजार, मलेसियामा ५५ जना